ukulungiswa kwezixhobo zokuhlawula iirhafu?
umbuzo ukulungiswa kwezixhobo zokuhlawula iirhafu?
iinyanga 1 kunyaka 3 eyadlulayo #881 by dylviutter
nceda bafana kwi rikoooo! Ndinezinye izinto ezintle zokuhlawula iifayili kodwa ke ndingabonakali ukuba ndifumane iincwadi zokuthenga. ngaba unokwenza oku into? Ukucela ukulungiswa okunye:
I-CLS 747-200 HD version:
El Al (kunye nemithwalo) (OC):
UCaptain Sim 737-200 (okanye icebiso)
Ndiyabulela kakhulu ukuba kuya kwenzeka ukuba kube kuhle !!